नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): प्रहरी कार्यालयमा खम्बुवान आक्रमण, तीन प्रहरी घाइते !
प्रहरी कार्यालयमा खम्बुवान आक्रमण, तीन प्रहरी घाइते !
शुक्रबार पक्राउ परेका कार्यकर्तालाई छुटाउनुपर्ने माग गर्दै मोरङको बेलबारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुगेका खम्बुवान कार्यकर्ताले प्रहरी कार्यालयमा ढुंगामुढा आक्रमण गरेका छन् । उनीहरूको आक्रमणबाट तीन प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरूमा प्रहरी निरीक्षक रुद्र चुँडाल, हवल्दार ज्ञानबहादुर राई र सशस्त्र प्रहरी सुजन राई रहेका छन् । उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । झण्डै २ सयको संख्यामा आएका खम्बुवान कार्यकर्ताले प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरेपछि प्रहरीले प्रतिरक्षामा फायरिङ गरेको
थियो । घटनामा केही प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका छन् ।